Nwoke na-eme ihe n'eziokwu mgbe ọ na-akwụ ụgwọ iPhone ya n'ime ime ụlọ ịwụ | Gam akporosis
Un Enweela nwa nwoke dị afọ 32 mgbe ọ na-agba ụgwọ hone ekwentị ya n'ime ime ụlọ ịwụ nke ụlọ ya. Dị ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Britain si kwuo, Richard Bull, onye ahụ metụtara, jikọtara chaja na ekwentị ya mgbe ọ na-eji ya na bat ahụ.
Nnukwu ndudue ebe ọ bụ na eriri ahụ abanyela na mmiri na-akpata ọgba aghara eletrik. A ga-eziga akụkọ nyocha ahụ na Apple iji 'dọọ aka ná ntị banyere ihe ize ndụ' nke ngwa ndị a dị ka 'ọ bụ ezie na ọ dị ka ha enweghị mmerụ, ha nwere ike ịdị egwu dịka onye na-ehicha ntutu n'ime ime ụlọ ịwụ.
Ndi smartphones dị ize ndụ mgbe ị na-akwụ ụgwọ?
Ihe omume a na - akpata esemokwu banyere ihe egwu nke ekwentị mkpanaaka nwere ike igbanye mgbe a na-ebo ha ebubo, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị echebara ya echiche Nsogbu nso nso a nke 7 Galaxy Note. Ọ bụ ezie na na nke a, mmejọ ahụ abụghị onye nrụpụta America.
Ihe akaebe nke eziokwu a bụ na ọkàikpe na-enyocha ikpe ahụ kwuru na ọnwụ ahụ bụ ihe ọghọm ma were na Apple enweghị ibu ọrụ, ọ bụ ezie na ha ga-eziga akụkọ iji zere ihe omume ndị yiri ya.
Ọzọkwa, ọ bụ ezie e merụrụ onye ahụ ọkụ, ọnye ọkụ gbara ya n'obi, aka na aka, ikekwe site na mgbawa nke ngwaọrụ ahụ. Ọtụtụ ndị ọkachamara n'ihe gbasara nchekwa egosila ihe egwu dị n'iji ngwa eletriki n'ime ime ụlọ ịwụ. Mmiri bụ nnukwu onye na-eduzi ọkụ eletrik na, ọ bụ ezie na ekwentị mkpanaaka na-arụ ọrụ na obere volta, mgbe ọ gbasara kọntaktị a, obere oge nwere ike ime.
Nke ahụ bụ, n'agbanyeghị otu esi eguzogide aja na mmiri ekwentị nwere, ị ga-enwerịrị obere isi. Na mbido ịkwụ ụgwọ ekwentị abụghị ihe dị egwu, maka nke a enwere usoro nchekwa, mana ihe adịghị njọ bụ ijikọ chaja ma jiri ekwentị na bat ahụ, dịka o mere na nke a.
A ihere ọnwụ a, ọ bụ ezie na ọ hapụrụ anyị a doro anya ozi: Dị ka onye na-ehicha ntutu, ọ bụrụ na ị na-eji ekwentị gị na bat ahụ mgbe ị na-akwụ ụgwọ ya, enwere ike ịnwụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Otu nwoke na-arụ ọrụ eletrik mgbe ọ na-akwụ ụgwọ iPhone ya na ime ụlọ ịwụ
Kedu ihe n’eme mgbe ekwentị gị nwere nghọta karịa ọ ga - ewe gị. Wouldnye ga-eche